Siyaasiga Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo sanad kadib Muqdisho ku soo laabtay – idalenews.com
Siyaasiga Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan oo horay u soo noqday Ra’iisul Wasaare kuxigeen ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, sanad kadib markii uu ku dhaawacmay weerar ismiidaamin ah oo bishii May ee sanadkii hore ka dhacay degmada Dhuusa Mareeb.
Mr Axmed Cabdisalaan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay mas’uuliyiin iyo siyaasiyiin, isagoo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan.
Waxaa uu ka mahad celiyay soo dhoweynta iyo dareenka dadka ka muujiyeen dhaawiciisa, waxaana uu xusay in ducadooda uu alle u aqbalay.
“Waxaan runtii u mahadcelinayaa asxaabta iyo walaalaha igu soo dhoweeyay, alle ayaa mahad leh inaan Muqdisho ku soo laabto sanad kadib, sanadkii la soo dhaafay waxaa leygu tala galay in qarixii aniga la igu dilo, alle waa iga bad baadiyay”ayuu yiri Axmed Cabdisalaan.
Axmed Cabdisalaan ayaa sheegay in hadafka uu dalka dib ugu soo laabtay iyo aragtidiisa uu dhowaan ka hadli doono, marka uu indha indheeyo xaalada magaalada sida uu hadalka u dhigay.
“Canada waa degenaa sanad caafimaad ah ayaan ugu maqnaa, waana soo laabtay, aad ayaa u sugayay in magaalada aan arko, alxamdulilah waa fiicanahay dhamaan intii asxaab ah waxaan u sheegayaa inaan caafimaad qabo, alle waa iga bad baadiyay dhibaatada”ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Siyaasiga Axmed Cabdisalaan lagu wado inuu ka mid noqdo isku shaandheynta qorshuhu yahay in lagu sameeyo Golaha Wasiirada Xukuumada Saacid.
1-dii bishii May ayay aheyd markii ruux ismiidaamiyay uu weeraray goob lagu qaxweeyay oo ku taal Bartamaha Dhuusa Mareeb, halkaasoo ay ku sugnaayeen Xildhibaano iyo siyaasiyiin uu hogaaminayay Axmed Cabdisalaan, waxaana weerarkaas ku dhintay labo Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaankii KMG, halka dhaawac uu soo gaaray Axmed Cabdisalaan iyo dad kale.
Wasiirada Arrimaha Dibada Soomaaliya oo xubno ka socday Beesha caalamka kula kulantay Muqdisho